September 3, 2019 - Myitter
ဝင်းနဲ့ ဇော် လွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေအတွက် ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ကိုရဲမင်း (ACC) ပရိသတ်ကြီးရေ၊ မကြာသေးခင်က ဝင်းနဲ့ ဇော် လွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ACC က ကိုရဲမင်းက အဖြစ်မှန်ကို အခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ သတင်းမှားပါတယ် 29-8-2019 ရက်နေ့က […]
မနက်​ဆို မိန်းမ ပဲပြုတ်​သည်​ အသံ​တွေကြားမှာ “ပဲပြုတ်​ နံပြား” ဆိုတဲ့ ​အဘ အသံကြားပြီဆို ​ပြေး ​ပြေးဝယ်​ရတာ အ​မော….အရင်​က​တော့ အဖွားက ​အော်​​ပေးတာပါ မနက်​ဆို မိန်းမ ပဲပြုတ်​သည်​ အသံ​တွေကြားမှာ “ပဲပြုတ်​ နံပြား” ဆိုတဲ့ ​အဘ အသံကြားပြီဆို..​ပြေး ​ပြေးဝယ်​ရတာ အ​မော….အရင်​က​တော့ […]
သူတောင်းစားကို အဆင့်မခွဲပဲ ကြင်ကြင်နာနာဆက်ဆံခဲ့တာကြောင့် နာမည်ကြီးနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်
နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်က ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းပြီး ယောကျာ်းပီသတာကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ချောသလို စိတ်ထားလေးလည်း ကောင်းတဲ့ ပိုင်တံခွန်ကို ပရိသတ်တွေက ပိုပြီးတော့တောင် ချစ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက ထိုင်းနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
မိတ်ဆွေတို့ ရေ….မျောက်ငိုသီး စားပြီး ဆရာဝန်ဆီမသွားဘဲ နေကြရအောင်᠌᠌᠌ ဘာ့ကြောင့် ‘မျောက်ငိုသီး’ဟု အမည်ပေးထားသလဲဆိုရင် မျောက်သတ္တဝါ ဆိုသည်မှာ အပင်၏ အခေါက်၊ အရွက်၊ အဖူး၊အပွင့်နှင့် အသီးတို့ကို ခူးဆွတ် စားသုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအသီးဟာ အပင်ရဲ့ ကိုင်းအဖျားမှာ တွဲလောင်းကျပြီး သီးတဲ့အသီး ဖြစ်ပါတယ်။ မျောက်ဟာ ဒီအသီးကို […]
ကာဂျီကီမုန်တိုင်းကြောင့်် နောက်သုံးရက်အထိ လေပြင်းတိုက် ၊မိုးရွာ ၊ရေကြီးနိုင်ပြီး မြေပြိုမှုများလည်း အထူးသတိပြုရန် ” ထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေသတင်း” (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃)ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၀:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) ထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေသတင်း အမှတ်စဉ်(၁၀/၂၀၁၉) (က) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၉:၃၀)နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း၏ အရှိန် […]
“ရင်နာတယ် အဖေ့သားလေးရေ 😢 ငါ့သားလေး မသွားချင်ပါဘူးလို့ ခဏခဏပြောနေတဲ့ကြားက အဖေတို့ခေါ်သွားမိခဲ့တာလေ ဒီလိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကို အဖေသားလေး ကြိုများသိနေသလား သားလေးရယ် သားရယ် အဖေတို့ကကောင်းစေချင်တဲ့မေတ္တာနဲ့ ဒီနေရာကိုခေါ်လာခဲ့မိတာပါ ငါ့သားရယ်😢ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပဲမမျှော်လင့်ထားတာတွေဖြစ်လာခဲ့ရတယ်ငါ့သားရယ်၊ အဖေ့သားလေးလည်းပါတယ်လေ ခွဲစိတ်ဆရာမကြီးဆီသွားတွေ့တော့ သူကပြောတယ်လေကွာသားရဲ့ရောဂါက အူလမ်းကြောင်း အာရုံကျောအားနည်းနေတာတဲ့ အဲဒီနေရာလေးကို စအိုကနေတစ်ဆင့် အသေးစား ခွဲစိတ်လိုက်ရင် ကောင်းသွားမှာပါ၊စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး […]
ဘက်ထရီခြောက် အဟောင်းမှုန့်များနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကော်ဖီမှုန့််များဖမ်းမိ
ဘက်ထရီခြောက် အဟောင်းမှုန့်များနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကော်ဖီမှုန့််များဖမ်းမိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒါနန်း ပြည်နယ်က မိသားစုတစ်စုဟာ စားသုံးသူတွေကို ဒုက္ခရောက်စေမယ့် ဆိုးရွားသော ကော်ဖီများ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိတာကို ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Nguyen Thi Loan ရဲ့ ကော်ဖီထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို အိမ်နီးနားချင်းတွေရဲ့ သတင်းပေးမှုအရ ပြီးခဲ့တဲ့ […]
သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ဝင်းနဲ့ဇော်တို့ အတွက် နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက် လာပါပြီ လတ်တလော မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ ဝင်းနဲ့ ဇော် အတွက် အားလုံး က စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံး၊ အနုပညာရှင်များပါမကျန် သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ ခွန်အားလေးတွေ နဲ့ ထိုင်းဘုရင့် စာမျက်နှာအောက်မှာ အနားခံကြတာ ၊ ထိုင်းမီဒီယာတွေ […]
အလုပ်အကိုင်အထိအခိုက်ဖြစ်အောင်… နှောင့်ယှက်သူ ..ကိုယ်နဲ့မဆင်မပြေဖြစ်နေသူများကို ရေဖြင့်ာပို့နည်း. မေတ္တ. “
ေ ရမတ်ေတာပို့နညျး… လက်ေ တွ့ နည်းကောင်း တစ်ခုပေး မည် ။ အကယ် ၍ စိတ်အာရုံညှတ်ပြီး မေတ္တာပို့ပေးနေရုံသက်သက်ဖြင့် ထိုသူ ၏ ရန်မူနေခြင်း ကိစ္စ အမြန် ပြေအေးသွားမည် မထင်ရလြှင် ရေမေတ္တာပို့ယူပါ ၊ နညျးမှာ မိမိအလိုရှိသူကို ရညျမှတျ၍ သနျ့ရှငျးသော […]